people Nepal » बाहुबली २ ले बनायो अहिले सम्मको तीन ठूला रेकर्ड ! बाहुबली २ ले बनायो अहिले सम्मको तीन ठूला रेकर्ड ! – people Nepal
बाहुबली २ ले बनायो अहिले सम्मको तीन ठूला रेकर्ड !
बलिउडमा यतिबेला सबैभन्दा प्रतिक्षित फिल्म हो बाहुबली-२ । यो फिल्मले भारतमा अहिलेसम्मका सबै व्यापारिक रेकर्डहरु तोड्ने अनुमान गरिएको छ ।